Blog Shop - Myanmar Blogshop - Smart Watch for Lady
❤️ SALE ❤️ ❤️အရင်လို smart watch ပုံရိုးရိုးကြီးမဟုတ်တော့ပဲ ပျိုပျိုမေတို့ ခေတ်ဆန်ဆန်၊ စတိုင်ကျကျ၊ နေ့စဉ် ရုံးသွားဖို့အတွက်ရော၊ ပွဲတက်အတွက်ပါ သင့်လျှော်တဲ့ Smart Watch လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ❤️ ဒီ Smart Watch လေးဟာ ဒိုင်ခွက်ဒီဇိုင်းပုံ ၅ မျိုးပြောင်းသုံးနိုင်ပြီး ပျိုပျိုမေတို့ရဲ့ Apple ရော၊ Android ဖုန်းနဲ့ပါ တွဲဆက်ပြီး အသုံးပြုနုိုင်ပါတယ်။ ဒီ Smart Watch လေးရဲ့ ဒီဇိုင်း နဲ့ စွမ်းဆောင်မှုကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်..
- ISP full view 3D Single Art Lens သုံးထားပြီး glass cutting process modeling နဲ့မှန်သား မျက်နှာပြင်ကို အသွေးပေါ်အောင် ဖော်ထားတဲ့အတွက် အခြားသော Smart Watch တွေနဲ့မတူ ထူးခြားတဲ့ ဆွဲဆောင်မှု့ကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။- Aluminum နဲ့ Stainless steel 316L Grade ကို နေရာအလိုက် တွဲစပ်ပြီး အချိုးညီညီ အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် နာရီဒီဇိုင်းပေါ့ပါးမှု့ကို အထောက်အကူပေးပြီး၊ SUS 316 Stainless Steel ရဲ့အကြမ်းခံနုိုင်မှု့က ပျိုမေတို့နာရီရဲ့ ထိခိုက်မှု့တွေကို လျှော့ချပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။- နာရီ ဒိုင်ခွက် ၅ မျိုးပါဝင်တဲ့အတွက် ပျိုမေတို့ စိတ်ကြိုက် နာရီဒိုင်ခွက်ကလေးတွေကို ရွေးချယ်ပြီး ၀တ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။- IP 65 rating မို့ ရေစိုခံဖြစ်သလို၊ ခုလိုမိုးရာသီမှာဖြစ်စေ.. သင်္ကြန်ချိန်မှာဖြစ်စေ ရေစိုပျက်စီးမှာ မပူရတော့ဘူးပေါ့။- Magnetic Charging ဖြစ်တဲ့အတွက် အားသွင်းရ လွယ်ကူအဆင်ပြေစေမှာပါ။- Bluetooth 4.0 support ဖြစ်ပြီး OS 8.0/ android 4.4 နဲ့အထက် မည်သည့်ဖုန်းမဆို တွဲသုံးနိုင်ပါတယ်- dial size 38x30x11.5mm ရှိ ပြီး IPS 1.22 inches ရှိ Touch screen ဖြစ်ပါတယ်။ - အရောင်အနေနဲ့ Charming Gold နှင့် Silver ဆိုပြီး အရောင်နှစ်မျိုးနဲ့ ထွက်ရှိလာပါတယ်
❤️ Smart Watch လေးရဲ့ Function တွေကတော့✔️ ClockSmart Watch ဖြစ်တဲ့အတွက် နာရီအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နာရီမှာမှ ဒိုင်ခွက် ဒီဇိုင်း ၅ မျိုးပြောင်းသုံးနိုင်ပါတယ် ✔️ Syn Phone Call & answer Callဖုန်းဝင်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းမကိုင်ပဲ Smart Watch ကလေးကပြုလုပ်နိုင်တာကြောင့် ကားပေါ်မှာဖြစ်စေ အလုပ်မအားတဲ့အခါဖြစ်စေ ပိုအဆင်ပြေစေမှာပါ✔️ Syn SMS / email ဖုန်းထဲကို SMS ၀င်လာတာနဲ့ နာရီမှာလည်း Reminder လာမှာဖြစ်သလို SMS တွေကိုလည်း ဖတ်လို့ရပါတယ်။ ရိုးရိုး mgs သာမက email, Facebook, we chat, Skype, QQ, Twitter အစ ရှိတဲ့ mgs တွေပါ Syn လုပ်နိုင်ပါတယ်✔️ phone book Contact တွေကိုရှာနိုင်ပြီး အလွယ်တကူဖုန်းခေါ်နိုင်ပါတယ် ✔️ Heart Rate Monitoringရင်ခုန်သံတွေ သိပ်မြန်နေသလား…? မပူပါနဲ့ Smart Watch လေးက ပျိုမေတို့ရဲ့ ရင်ခုန်သံစည်းချက်ကို တိုင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်မက Phoneက App ထဲမှာလည်း နှလုံးခုန်နှုန်းကို Record လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် ကျန်းမာရေးလိုက်စားသူနဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေလှပါတယ်✔️ ကျန်းမာရေး“FanDoWear” ဆိုတဲ့ App လေးကို Apple Store မှာရော၊ Android Google Play Store မှာပါ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလို့ရပါတယ်။ သို့မဟုတ် Amazing IT World Website မှာ Download ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ App ကို Smart Watch နဲ့တွဲပြီး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ပျိုပျိုမေတို့ရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှု့နဲ့ ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်းမှု့ပမာဏတွေကို နာရီမှတစ်ဆင့် ကြည့်နိုင်သလို၊ ဖုန်းထဲမှာလည်း Record လုပ်ပြီး သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အားကစားလုပ်တဲ့, diet လုပ်နေတဲ့ ပျိုမေတို့ အတွက်လည်း အထောက်အကူပြုစေမှာပါ✔️ Long Seat Reminderဒါfunction လေးကတော့ အလုပ်အရမ်းကြိုးစားတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက်ပါ။ အချိန်အကြာကြီး အလုပ်စားပွဲမှာ ဈာန်ဝင်နေတတ်တဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် ဒီ Smart Watch ကလေးက အလုပ်ခဏနားပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု့ လုပ်ဖို့ သတိပေးဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မှာ အကြာကြီး ကိုရီးယားကားကြည့်တတ်တဲ့ မေမေ့အတွက်လည်း မိမိကိုယ်စား သူကသတိပေးပေးမှာပါ။ ✔️ Anti-loss Alertတစ်ကယ်လို့ taxi ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ စားသောက်ဆိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ခရီးသွားတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် Phone မေ့ကျန်ခဲ့ရင်တော့ ဒီSmart Watch ကလေးက ပျိုပျိုမေတို့ကို သတိပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။✔️ Camera remote Camera remote လိုသုံးနိုင်တာကြောင့် အဝေးက selfie ရိုက်ရင်လည်း အဆင်ပြေစေမှာပါ။✔️ ဒါ့အပြင် အခြားသော Pedometer, Calls reminding, Music player, fitness Tracker, Sleep monitoring, Find phone, Sedentary Reminder, Sync Email, Calculator, Timer, Calendar, wGestrues awaken စတဲ့ Function တွေပါဝင်တာကြောင့် ပျိုမေတို့စိတ်ကြိုက်တွေ့စေမယ့် Smart Watch လေးပါ။
ပျိုပျိုတို့ အတွက်ကော .. မိမိတို့ ချစ်တဲ့သူတွေကို မွေးနေ့လက်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နှစ်ပတ်လည် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ဖြစ်ဖြစ် ပေးလို့ သင်တော်တဲ့ Smart Watch လေးတစ်ခုပါ။
❤️ Original Price - ၇၈၉၀၀ ကျပ်ရှိပြီး ခုရက်အတွင်းဝယ်ယူပါက Pre Order : ၇၃၉၀၀ ကျပ်နှင့် ရောင်းချပေးနေပါပြီ (Only promotion period)
ဒီ smart watch လေးကတော့ preorder ဖြစ်တာကြောင့် တခြားအရင် ပစ္စည်းတွေလို မဟုတ်ပဲ shipping နည်းနည်းတော့ စောင့်ပေးကြပါလ်ို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်
Amazing 'IT' WorldContact - 09451821649 or chat box မှာဆက်သွယ် စုံစမ်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်..Yangon home delivery service ++နယ်မြို့များသို့လည်းကားဂိတ်မှတဆင့်ပို့ပေးပါတယ်? ပစ္စည်းလှလှ ဆန်းဆန်းလေးများ အသစ်အသစ်လေးတွေ ထွက်လာရင် ကြည့်ဖို့?? www.facebook.com/amazingitworld.sg ကိုလည်း Like လုပ်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ..
Model Number LEM2
Delivery Method door to door delivery
Total Products: (2)
No.188 (1st Floor), Bogyoke Road, between Thein Phyu street & Thein Phyu lane, Botataung Township, Yangon, Myanmar
Price: MMK 78,900
Total View: 1571
10 inch Tablet Octa Core 4GB...
© 2013 - 2022 Myanmar Blog Shop